Ihe Ntanetị Weebụ Web maka Onye Mmemme Site na Semalt
Ọ bụrụ na ị na-ekpochapụ weebụsaịtị na Python, ọ ga-abụ na ị nwalela httplib na arịrịọ urllib. Selenium bụ usoro Eke Ọhụụ zuru ezu nke na-eji bọtịnụ ewepu ibe weebụ. Ọrụ ndị a niile adịghị enye ihe ndị a pụrụ ịdabere na ya; ya mere, ị ghaghị ịgba mbọ iji nweta ọrụ gị:
Ọ bụ ihe na-ewu ewu Chrome; Nchịkọta data na-ewepụ data sitere na ibe weebụ ma dị elu. Ndị mmemme na coders nwere ike ịdakwasị ọtụtụ ọnụọgụ dị iche iche, ebe nrụọrụ weebụ na-elekọta mmadụ na ebe nrụọrụ weebụ, ọpụpụ njem na ntanetị akụkọ. A na-anakọta data ma wepụ ya dị ka ntụziaka gị, a na-echekwa nsonaazụ ya na CSV, JSON, na XLS formats - china blueline hardcover notebook. Ịnwekwara ike ibudata ntanetị ma ọ bụ dum na ebe nrụọrụ weebụ na ụdị ndepụta ma ọ bụ tebụl. Nbudata data abụghị naanị maka onye mmemme ma ọ dịkwa mma maka ndị na-abụghị onye mmemme, ụmụ akwụkwọ, freelancers, na ndị ọkà mmụta. Ọ na-arụpụta ọtụtụ ihe arụ ọrụ n'otu oge ma na-azọpụta oge gị na ike gị.
2. Weebụ Web:
Ọ bụ ihe mgbakwunye Chrome ọzọ; Nbudata Weebụ nwere ntinye mmekọrịta enyi na-enye anyị ohere ịmepụta sitemaps n'ụzọ dị mfe. Site na ndọtị a, ị nwere ike ịnyagharịa site na ibe weebụ dị iche iche wee kpochapụ ebe dum ma ọ bụ nkeiche. Nbudata weebụ na-abia ma n'efu ma kwụọ ụgwọ ụgwọ ma kwadoro maka mmemme, webmasters, na mmalite. Ọ na-ewe nanị sekọnd ole na ole iji kpochapụ data gị ma budata ya na draịvụ ike gị.
Nke a bụ otu n'ime ihe mgbakwunye Firefox kachasị ama; Onye na-ekpochapu ihe bụ nyocha ihuenyo dị ike ma dị ike na ọrụ ntinye data. Ọ nwere interface enyi na onye ọrụ ntanetị na nchịkọta data site na tebụl na ndepụta. A na-agbanwe data ahụ wee bụrụ ihe a na-agbanwe agbanwe ma nwee ike ịhazi. Ọrụ a bara uru maka ndị na-eme ihe nkiri na iwepụta ọdịnaya weebụ site na iji XPath na JQuery. Anyị nwere ike idetu ma ọ bụ bufee data gaa na Google Docs, XSL na JSON faịlụ. Mpaghara na atụmatụ nke Scraper yiri Mbubata. Ee.
Ọ dabara maka ụlọ ọrụ na onye mmemme; Parsehub abughi nani Mgbasa ozi Firefox kamakwa nnukwu ihe mkpochapu na ntanetu. ParseHub na-eji teknụzụ AJAX na saịtị ntanetị na redirects na kuki. Ọ nwere ike ịgụ ma gbanwee akwụkwọ weebụ dị iche iche ka ọ bụrụ ozi dị mkpa n'ihe gbasara nkeji. Ozugbo ebudatara ma rụọ ọrụ, ParseHub nwere ike ịrụ ọrụ ọrụ nchịkọta data n'otu oge. Ngwa ngwa desktọọpụ ya maka Mac os X, Linux, na ndị ọrụ Windows. Nkwekọrịta ya na-eme ihe ruru iri na ise na-ekpuchi ọrụ, na atụmatụ ịkwụ ụgwọ na-enye anyị ohere ijikwa ihe karịrị 50 ọrụ n'otu oge.